Home » Fanamarihana DangoBuds: Tatitra nohavaozina farany tamin'ny 2021 Dango Buds & fihenam-bidy ankehitriny!
4 Des 2020 (Famotsorana Wired), serasera Sahiba inc: Fanamarihana DangBuds : Ny Earbud dia teknolojia amin'ny lamaody, amin'ny fomba ary amin'ny fahamorana. Earbuds dia noforonina noho ny havizanana sy fahasosorana tamin'ny tariby tsy voasokitra tao amin'ny telefaona finday mahazatra. Earbuds dia fitaovana finday sy lamaody izay mety ampifanarahana amin'ny fitaovana hafa amin'ny alàlan'ny teknolojia Bluetooth.
Earbuds dia nanampy be tamin'ny fanaovana izay hankafizanay ny feon-tsainay hatramin'ny farany sy nahatonga ny fifandraisan-davitra an-telefaona ho hendry sy mahazo aina kokoa. Azonao atao ny manamarika antso iray amin'ny felatananao fa tsy amin'ny sofinao mitazona telefaona, fa afaka mihaino ny fiovanao mazava sy am-pahalalana toy ny tamin'ny lasa ianao.
Manararaotra an'ity DangoBuds ny famerenana dia afaka manampy anao amin'ny fianarana ilay entana mangalatra seho azo alaina!
Tsidiho ny tranokala DangoBuds ofisialy ary mahazo 50% anio
Inona ny DangoBuds Wireless Earbud?
DangoBuds dia earbud izay manome feo kalitao sy mirindra. Rehefa mampiasa azy ireo hihainoana feo mandeha. DangoBuds, toy ny ankamaroan'ny earbuds hafa, dia mampiasa teknolojia Bluetooth hampifandraisina amin'ireo fitaovana ampiasana Bluetooth fanampiny. Rehefa atambatra, DangoBuds afaka miasa tsy misy vato misakana roa metatra miala tsy miala amin'ny bandwidth. Izy io dia vita amin'ny fitaovana kalitao misy fiasa tsy manam-paharoa toy ny suppresseur tabataba, izay ahafahanao mihaino audio kalitao eny am-pandehanana.
Manome toky ny tsiambaratelo farany ambony, izay manoro hevitra anao, dia afaka maheno fitsipika mitovy amin'ny ankamaroan'ny fiasan'ny earphones hafa. DangoBuds miaraka amin'ny boaty fametahana izay ahafahanao mifehy ny fitaovana. Izy ireo dia miaraka amin'ny batterie Li izay mampiasa fahaiza-manao maharitra sy fiampangana haingana.
(Tahiry voafetra) Manafatra an'i DangoBuds ankehitriny amin'ny vidiny manokana - 50% off
DangoBuds zava-misy ara-teknika
Tech (miaraka amina feo manodidina ny 360 degre mangarahara); microphone roa mifangaro.
Color: fotsy na mainty.
Weight: 4 grama.
Fomba fampiasana: famonoana rano Noho ny fampianarana fiarovana ny rano IPX7; Fiarovana amin'ny orana, hatsembohana, rano.
fa mamaly ny:Recharge Maherin'ny 50 ora ny fotoana filalaovana hatramin'ny in-8 Amin'ny alàlan'ny charger finday 800 mAh (ny sarany iray dia manome ora 8 amin'ny fotoana filalaovana).
fampiharana: Toy ny sofina handrenesana feo ary ho headset amin'ny telefaona.
Tombontsoa amin'ny DangoBuds Earbuds
DangoBuds mampiasa ny haitao farany nify manga, izay mampita feo mifanaraka sy avo lenta tanteraka avy amin'ilay fitaovana mifandray amin'ny DangoBuds, ary tsy hanana na inona na inona hanaiky lembenana ianao. Ny ankamaroan'ny olona any dia manary ny fakan-tsarimihetsika tariby mba hanana DangoBuds lamaody sy lamaody kokoa.
Tena takatry ny vola
Miaraka amin'ny asa mandroso rehetra an'ny DangoBuds amin'ny telefaona finday Wired dia azonao atao ny mamintina haingana fa hanafintohina ny vidiny ary mihoatra lavitra noho ny an'ny telefaona tariby. Na izany aza, ny tena zava-misy dia ireo rehetra ireo dia maniry fa lafo avokoa. DangoBuds tsy mora vidy fotsiny fa misy fonosana fihenam-bidy.
Raha mila fanazavana rehetra dia tsidiho ny tranokala ofisialin'i DangoBuds
Ny zava-misy fa mampiasa teknolojia analog izy io dia midika fa mety Hifandray amina fitaovana maro izy ireo raha mbola ampiasan'ny Bluetooth. Mifanohitra amin'ny earphones nentim-paharazana izay mampiasa kofehy. amin'ny DangoBuds, azo atao ny mametraka amin'ny fitaovana betsaka araka izay azo atao.
Olona antonony iray no nampiasa ny earphones Standard tamin'ny tariby talohan'izay. Diniho ny zavatra niainanao tamin'ny tariby mifampitohy, rehefa tafiditra ao anaty olona ianao na zavatra hafa, ny earphones misintona avy amin'ny sofinao misintona avy amin'ny telefaoninao miaraka amin'ireo findainao milatsaka amin'ny tany, ary ny fahafaham-baraka an'i "Azafady, mitandrema tsara amin'ny sofinao, Mba miangavy re." Earbuds ihany no tena izy.
Antso tsy misy tanana
HD mikrô izay manome feo audio kalitao avy hatrany rehefa mamorona antso an-tariby ianao. Tombony lehibe ho an'ireo olona tia miantso an-telefaonina mandritra ny diany na hery. Ny fanaovana antso dia tsy hampanalavitra anao amin'ireo orinasanao hafa.
DangoBuds dia tena milay amin'ny lokony fotsy sy mainty. Ny loko roa dia misy mifanaraka amin'ny safidinao manokana sy ny lamaodyo. Ireo kiboriny ireo dia ho zavatra lavorary hananana rehefa mandeha any amin'ny gym na birao. Mahatonga anao ho hendry sy kanto izany. Indraindray ny olona misafidy ny hampiditra.
Alao ny DangoBuds amin'ny vidiny fampidirana HALF OFF! Mihetsika ankehitriny, fihenam-bidy 50% ampiharina mandeha ho azy
Fa maninona no tadiaviko ireo earbuds ireo?
Ny sofina sofina ao anaty sofina DangoBuds vondron'olona kendrena samihafa. Ny vondrona mpividy kendrena voalohany dia ahitana ny olona rehetra sosotra amin'ny tariby am-peo mandritra ny fotoana maharitra. Matetika ny rohy dia mifandona amin'ny volo na amin'ny akanjo aza. Amin'ny fisiana isan'andro tsy tapaka, dia hita avy hatrany ho toy ny sakana izany ary mametra ny fahafinaretana amin'ny fandefasana mozika na ny sehatra vao haingana indrindra amin'ity fandaharana tena tiana ity. Aorian'izay, ny rohy tsy hita dia hamonjy anao amin'ny famahana ny tariby. Zava-dehibe amin'ny fandaharam-potoana isan'andro isan'andro ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa rehetra ny earphones klasika.
Vondrona kendrena iray hafa dia misy ny olona mazoto amin'ny fanatanjahantena. Ao amin'ny gym, mandritra ny bisikileta na jogging, ny tariby indraindray dia somary manelingelina na misavorovoro amin'ny rivotra rehetra amin'ny tarehy. Saingy, ny olona amin'ny sofina an-tsofina dia tsy afaka mamaha an'io olana io fotsiny. Ny mpanamboatra dia manao doka ny tabataba manelingelina andavanandro Toy ny feon'ny teknolojia ny feon'ireo mpijery. Ity teknolojia ity dia tsy mety diso. Ny fihazakazahana eo akaikin'ny tranokala fananganana tabataba dia manampy ny Noise Active.
Tsidiho eto ny tranonkala ofisialin'ny DangoBuds!
Aiza no hividianana Earbud Wireless DangoBuds?
Ny toerana hanafarana an'i DangoBuds dia avy amin'ny tranonkala ofisialy hahazoana tombony azo amin'ny vokatra tena izy sy kalitao, ary tolotra bonus hafa misy Na fividianana fihenam-bidy. Aza adino fa mazàna avo kokoa ireo fonosana fihenam-bidy raha mividy bebe kokoa amin'ireo vokatra ianao. Izany no fomba fiasa amin'ny fivarotana antsinjarany maro.
Ity atiny ity dia navoakan'ny orinasan'ny serasera Sahiba. Ny Departemantam-baovao WiredRelease dia tsy nandray anjara tamin'ny famoronana an'ity atiny ity. Ho an'ny fanadihadiana momba ny serivisy famoahana gazety, azafady azafady [email voaaro].